"ကျားကျားကြိုက်ကြိုက်" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာမီရုံတင်မည် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၂ – မိတ် ကပ်ပညာရှင် LGBT လေးဦး နှင့် သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်၊ မင်း မော်ကွန်းတို့ အဓိကပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားသည့်]]ကျားကျား ကြိုက်ကြိုက်}} ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကို ဩဂုတ် ၂၉ ရက်တွင် စတင် ရုံတင်ပြသသွားတော့မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်ထား သည့် သရုပ်ဆောင် မိတ်ကပ်ခင် စန်းဝင်းက ]]ပြောရရင်တော့ ကိုယ်က ဇာတ်ကားထဲမှာ အိုက်တင်လုပ်တာလည်း သိပ်အားမရဘူး။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိပ်အားမရတာလည်းပါပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းကိုရိုက်မယ်လို့ပြောတဲ့ အချိန်ကတည်းက အဓိကကတော့ ကိုယ်တွေလို လူမျိုးတွေကို ရယ်တာ သရော်တာ လှောင်ပြောင်တာတွေပါမယ်ဆိုရင် လုံးဝမရိုက်ဘူး။ ကိုယ်တွေလောက သားတွေကို ထိခိုက်မယ့်အရာမျိုးကို မလုပ်ချင်ဘူး။ အဲဒါမျိုးတွေလည်း ဒီဇာတ်ကားမှာ မပါတာကြောင့် ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်က အပြင်မှာလည်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လို နေတာကြောင့် မိန်းမလျာပုံစံအိုက်တင်တွေစကားပြောတာတွေဆို သိပ်မလုပ်ချင်ပါဘူး}}ဟုပြောသည်။
ယင်းဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ ပြည်ဟိန်းသီဟက ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် မြင့်မြတ်၊ မင်း မော်ကွန်း၊ မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်း၊ မိတ်ကပ်လင်းလင်း၊ မိတ်ကပ်ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)၊ မိတ်ကပ်မထက် (Pop Soul)၊ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ၊ ကေညီနှင့် ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်များအဖြစ် ရွှေရင်အေး၊ ထက်ထက်ထွန်းတို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ် သံအမတ်ကြီးနှင့် မြန်မာမီဒီယာများ တွေ့ဆုံပွဲတွင် OBOR ၊ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်?
ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းတွင် လူစားဝင် ကစားမှုအများဆုံး စံချိန်ကို တိုက်စစ်မှူး ပီတာခရော့ခ်ျ ??